Ny Apple TV 3 dia mahazo fantsona vaovao telo manomboka anio | Vaovao IPhone
Miguel Hernandez | | Apple tv, Apple products
Ny CEO Apple Apple Tim Cook dia nanamafy fa ny taranaka Apple TV manaraka dia ho azo amidy amin'ny Alatsinainy ho avy izao any Etazonia, na izany aza, Apple TV 3 dia mbola manana fiainana be mialoha io. Vao tsy ela akory izay no nohavaozina tamin'ny fahatongavan'ny fantsona vaovao telo ho eo aminy interfaceIreo voafidy dia CBS, NBC ary M2M, azo alaina manomboka anio amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahatelo. Toa tsy nitsahatra ny nifandray tamin'ny fahitalavitra i Apple mba hampiroborobo ny atiny ao anaty boaty multimedia marobe, izay mety hanaporofoana mazava fa manakaiky ny tena zava-misy ny fahitalavitra an-tserasera Apple.
Marina fa hanana ny fivarotana fampiharana azy ny taranaka vaovao an'ny Apple TV, izay hahatonga azy io tsy ho voasakana intsony. Na izany aza, ny fanontana teo aloha an'ny Apple TV dia mbola mitaky ny famporisihana an'i Apple hanana fantsona vaovao amin'ny rindranasa, saingy toa tsy nahavita nandao azy izy ireo, ary izany dia famantarana tsara, indrindra ho an'ireo izay nanararaotra ny varotra Apple TV 3 farany indrindra hahazoana azy io. Ireo fantsona vaovao dia efa misy any Etazonia, tsy mila mpampiasa hanao karazana fanavaozana na fidirana an-tsehatra amin'ny rafitra.
Ny fampiharana CBS dia hahafahantsika mividy atiny feno karama, na dia any amin'ny firenena sasany aza dia afaka miditra amin'ny fahitalavitra mivantana amin'ny alàlan'ny fantsona Apple TV izy ireo. Ny CBS dia efa manana fanatanjahan-tena sy fantsom-baovao amin'ny Apple TV, ny fampiharana vaovao dia mikendry ny fialamboly, ary hanolotra atiny maimaimpoana mandritra ny herinandro mba hahafahanao manapa-kevitra raha hividy ilay famandrihana na tsia. Ary farany, ny fantsona NBC dia hanolotra atiny voaloa ihany koa. Mampalahelo fa tsy misy amin'ireo fantsona telo ireo manome atiny maimaimpoana. Ary farany, ny M2M dia fantsona natokana ho an'ny lamaody maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Apple TV 3 dia mahazo fantsona vaovao telo manomboka anio
illuisd dia hoy izy:
Fantatrao ve raha hanana endrika fanavaozana interface izy io?
Ahoana ny fomba fihenam-bidy avy amin'ny iOS 9 mankany iOS 8.4.1 miaraka amin'i OdysseusOTA 2.0